OneDrive inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro kune iyo Peek & Pop basa | IPhone nhau
OneDrive inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweiyo Peek & Pop basa
Cloud yekuchengetedza masevhisi ndiyo yakanyanya kushandiswa nevazhinji vashandisi kuwedzera nzvimbo yekuchengetera yemidziyo yedu. Gore rapera Microsoft yakamanikidzwa ku bvisa isingagumi yekutambira yakapihwa kune vese Hofisi 365 vanyoreri uchinge waona kuti vashandisi vakati wandei vakashandisa nzvimbo ino kuchengeta yakawanda mafirimu. Mhosva dzakakomba kusvika 70 TB yeruzivo. Asi kwete vashandisi vekunyorera chete vakakanganiswa neichi chidimbu, vashandisi veakaundi mahara vakatamburawo kutsamwa kweMicrosoft.
Parizvino kana iwe wagadzira account nyowani paOneDrive, vakomana vanobva kuRedmond vakatipa 15 GB yemahara nzvimbo, asi mushure mechiitiko ichi. Microsoft yakatanga kupa 5GB chete. Vese vashandisi vachiri ne15 GB nhasi vanozoona kuti mumwedzi mishoma iyo nzvimbo ichadzikiswa kusvika pa5 Gb, senge mazhinji masevhisi ekuchengetedza gore, kunze kweGoogle, inoenderera ichipa 15 GB yayo.
Kuti ubvunze ruzivo rwese rwatinochengeta muOneDrive, Microsoft ichangobva kugadzirisa application zvakare OneDrive inowedzera rutsigiro rwePeek uye PopNenzira iyi, kana tichida kuona zvirimo mune chero emafaira atinochengetera ruzivo, isu tinongofanirwa kumanikidza munwe wedu pachiratidziro kuratidza kuratidzwa kwezviri mukati mayo. Iyo inokurumidza nzira yekutsvaga iyo faira iyo yatisingakwanise kuwana mune chero dhairekitori uye yatisingakwanise kuibata kuburikidza neyakaganhurirwa injini yekutsvaga.
Chimwe chinhu chitsva chakabatanidzwa neMicrosoft ndiko kuzunguza mashandiro, kana tiine dambudziko nekushandisa kuzivisa vagadziri. Asi pamusoro pezvo, iyo interface yakagadziridzwawo zvishoma, iine kutaridzika kutaridzika zvinoenderana neyakajairika dhizaini yeIOS 9.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » OneDrive inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweiyo Peek & Pop basa
Ndichine 1.02 tb mune yangu imwe drive account.
Microsoft inogadziridza maHofisi ayo eApp nemaitiro mashoma ekuvandudza
Ichi ndicho chifananidzo chekutanga chaicho cheiyo iPhone 7? Mmmm ndinofunga kwete